Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana: Mifampihantsy ny mpomba sy ny mpanohitra
Fifidianana: Mifampihantsy ny mpomba sy ny mpanohitra
Tamin’ny alakamisy faha 02 novambra 2017 teo dia nanao valan-dresaka hoan’ny mpanao gazety ny mpanao politika maro eto Antananarivo. Tao amin’ny Hotel Colbert izy ireo no nanao izany. Milaza koa fa manampy azy hony ny vondrona erôpeanina sy ny amerikanina.
Fampitandremana ny fanjakana amin’ny tsy hisian’ny hosoka sy halatra ary fanaparam-pahefana no anton’izany. Tsy nisalasala ireto mpanohitra ireto nilaza fa aoka havoaka dieny izao ny lalàm-pifidianana izay hitantanana ny fifidianana izay ho filohampirenena amin’ny taona 2018 hoavy io. Tokony holazaina dieny izao koa ny datin’ny fifidianana io hoy hatrany izy ireo. Hatramin’izao tokoa dia tsy misy mazava izany eto amin’ny firenena. Navilivily tao amin’ny resaka lalàmpanorenana
ny sain’ny Malagasy teo aloha teo. Nazava nefa ny resaka rehefa tsy nahita rirany tamin’izany ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina sy ny tariny ka iny niarahana nahita iny ny fanoloana an’ingahy Honoré Rakotomanana tsy ho filohan’ny antenimierandoholona intsony fa nosoloina an’ingahy Rivo Rakotovao. Tao anatin’ny fotoana fohy dia nivadika ny raharaham-politika teto Madagasikara. Ingahy Rivo Rakotovao indray izany izao no hisolon-toerana an’ingahy Hery Rajaonarimampianina amin’ny maha filoham-pirenena azy mandritrin’ny fifidianana. Voalazan’ny vehivavy iray, izay tsy miraharaha politika loatra raha nahita iny fanoloana olona tsy amin’antony iny fa na ny zazakely mbola any ankibon-dreniny aza dia mahalala tsara ny dikan’iny fanovana iny. Izany indrindra no mahatonga ny raharaha-politika hafana amin’izao fotoana izao. Ny mpomba fanjakana milaza araka ny voalazan’ingahy Rivo Rakotovao fa izy ireo no lohalaharana ka afaka manao izay tiany hatao. Ny tsy eo amin’ny fitondrana indray dia mangataka mafy ny mangarahara sy ny ady madio ary ny fanajana ny lalàna.
Eo anatrehan’izany dia hita taratra fa manontanona ny firenena indray ny krizy politika vaovao. Samy tsy hilefitra ny roa tonta amin’izay mety ho vokatrin’ny fifidianana eo, fa indrindra raha toa ka mbola ingahy Hery Rajaonarimampianina hatrany no mpbola lany amin’izany. Ny eo amin’ny fitondrana indray dia manao izay tsy hanjakana’ny mpanohitra ka hiaro mafy ny toerana na amin’ny fomba ahoana na ahoana. Izany no hita taratra amin’ny zava-misy ankehitriny. Mifampihantsy sahady ary mifampiahiahy tanteraka ny mpifaninana. Izany no fototrin’ny korontana politika eran-tany ka izao tady hiverina indray eto Madagasikara izao. Mila mitandrina mafy ny vahoaka Malagasy amin’izany.
Ny tena olana nefa dia manantena ny hividy olona sy hanakalo akanjo(tee shirt) ny safidimbahoaka izy ireo. Tsy manana tsanga-kevitra, tsy misy programan’asa , tsy manana vinam-pampandrosoana sy vinam-piarahamonina fa manantena ny vola ho fitaovana amin’ny fifidianana avokoa. Dia mbola tsy ampy ny Malagasy ihany ve izay fividianana ny safidiny izay ka mbola ho voajono indray izy ireo amin’ny taona 2018 iny? Raha mbola miverina iny fividianana olona iny dia mazava hoazy fa tena dondrona tanteraka tokoa ny vahoaka Malagasy.